Manchester united oo wadahadal tos ah la bilowday Nasri iyo Ashley Young o qarka u saaran in uu Man United la saxeexo heshiis | WWW.DARARWEYNE.TK
Manchester united oo wadahadal tos ah la bilowday Nasri iyo Ashley Young o qarka u saaran in uu Man United la saxeexo heshiis
kooxda manchester united ayaa shaaca ka qaadey inay wadahadal la bilaabatey ciyaaryahanka dhexda uga ciyaara kooxda arsenal samir nasri.
ciyaaryahanka ayaa ka dhago adeygay inuu kordhiyo heshiiska uu kula jiro kooxda arsenal kadib markii ay masuliyiinta kooxda isku maandhaafeen xadiga mushaharka uu ciyaaryahanku qaadan doono.
Nasri aya la sheegey inuu dalbanayo inuu mushaharka badan kooxda arsenal halka masuuliyiinta kooxduna ka dalbanayaan inay wax yar ku daran ushaarka uu hadda qaato.
ismariwaagan ayaa keeney inay kooxo badan oo ka dhisan qaarada europe u hanqal taagaan ciyaaryahankan da’da yar ee lasoo baxay qaab ciyaared sii koraya, kooxahan oo kamid thaay inter milan, juventus iyo realmadrid iyo kooxda ey arsenal aadka uxafiiltamaan ee manchester united.
haddaba kooxda manchester united ayaa mudooyinkii u danbeeyey kudaba jirtay sidii ay bedal ugu hali lahayd paul scholes, sidoo kale ciyaaryahanka samir nasri ayaa cadeeyey in haddi ay manchester united soo codsato uu aqbali doono, taas o keentay in hunguri weyni galo tobabarhaa kooxda manchester united sir alex ferguson.
dhinaca kale kooxda manchester united ayaa qarka u saaran inay dhamaystirto heshiis ay la gasho ciyaaryahanka Ashley Young.
tobabaraha kooxda arsenal ayaa sheegay inuu samayn doono wax kasta oo uu isku hortaagi karp in nasri ka dego garoonka Old trafford, tobabaraha kooxda manchester ayaa lacag xad dhaaf ah ka helay masuuliyiintii kooxda
« Qalinkii Faysal Toosh
Mukhtaar Afgooye oo looga yeeray xulka da’yarta U-15 dalka England »